Bulshada Gaalkacyo ku dhaqan oo soo dhaweeyay Samafal Bilaash ah oo ka bilowday – Balcad.com Teyteyleey
Bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Don’t waste your time looking for affordable aciclovir deals anymore, because you’ve found it – buy your medicine for 0.6 USD now! Mudug ayaa si diiran oo laab furnaan ah u soo dhaweeyay Howlo samafal oo lacag la,aan ah oo soconaya mudo 5 cisho ah oo Magaaladaasi ay ka wadaan Koox Caafimaad oo uu Horkacayo Maamulaha Isbitaalka indhaha ee Alnuur ahna Gudoomiyaha jaamacada banaadir Dr Cabdirisaaq axmed Maxamed’ Dalmar’,waxaana kooxdaan ay ka kala socdaan Heyada Alnuur Foundation Somalia iyo Heyada Albasar ee Dalka Sacuudiga iyo Howlwadeenada Isbitaalka Indhaha Alnuur.
DR Cabdirisaaq Dalmar oo Horkacaya Howshaan ayaaa Carabka ku dhuftay in si bilaash ah wax loogu qabanayo Dadka danyarta ah iyo barkacaayaasha aan awoodin inay iska bixiyaan Lacagta isagoo xusay inaysan aheyn Markii ugu Horeysay oo howl ceynkaan oo kala ah ay qabtaan balse sanooyinkii la soo dhaafay ay sameynayaan Samafalkaan oo kale.
Maamulaha isbitaalka indhaha Alnuur Dr Dalmar oo hadalkiisa sii wata waxa uu Hoosta ka xariiqay in 2017 ay u qorsheysan tahay in bilaash indhaha loogu Fiiqo in ka badan 4000 oo bukaan oo ku kala sugan Caasimada Soomaaliya iyo Gobolada Wadanka.
Mar uu dr Dalmar ka hadlayay Tirada ka faaideysatay Mashruucaan bilaashka ah ee ka socda Gaalkacyo ayaa Yiri’Runtii Mashruucaan waa qeybo Badan yahay waxaana ugu tala galnay inay ka faaideystaan 4560 qof halka 400 oo kalena loo sameynayo qaliimada indhaha..
Qeybta hore ee mashruucan ayuu sheegay Dr. Dalmar in dabayaaqadii todobaadkii hore lagu soo gebagebeeyey isbitaalka Al-Nuur ee magaalada Muqdisho, halkaasoo indhaha loogu fiiqay dad gaaraya 500 oo qof oo ka kala yimid xeryaha barakacayaasha iyo degaanada ku dhow Muqdisho, halka 5,600 oo qofna loo sameeyey baaritaano iyo daweyn.
isbitaalka indhaha Alnuur oo la daah furay 22-9-2000 ayaa ah isbitaal ku daysho mudan waxaana Mudadii uu jiray uu ku talaaabsaday Horumar ay aaad ugu Riyaaqeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo u joogo waana isbitaal aan marna ka caajisin Danta Caamka ah ee uu ugu adegayo Dalkiisa iyo dadkiisa.
Bulshada kud haqan magaalada Gaalkacyo oo aan makaroofanka la dhexmarnay ayaa aad u soo dhaweeyay talaabooyinka caafimaad ee uu wado Isbitaalka indhaha Alnuur waxa auyna DR Cabdirisaaq Axmed Maxamed Dalmar Alle uga baryeen inuu Ilaaheey la garabgalo dadaalka uu u hayo Shacabkiisa iyagoo ku amaanay isbitaalka Indhaha Alnuur inuu yahay mid markasta u taagan Baahida Bulashada ee xaga Daryeelka caafimaadka.
Magaalada Muqdisho iyo Gobolada Dalka oo Salaad Roob doon ah maanta laga tukanaayo